စပါးအသင်းနဲ့ ပွဲအမီ ပေါ့ဂ်ဘာပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား – Myan Ball
စပါးအသင်းနဲ့ ပွဲအမီ ပေါ့ဂ်ဘာပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ယူနိုက်တက်နည်းပြ အိုလီဂန်နာဆိုးလ်ရှားက ပေါ့ဂ်ဘာပြန်လာနိုင်တာက အသင်းအတွက် ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူလိုက်သလို ခံစားနေရပြီး စပါးအသင်းနဲ့ ကစားမယ့်ပွဲအမီ ပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့ ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဟာ စက်တင်ဘာလကတည်းက ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဗင်တပ်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းဟာ ဒူဘိုင်းရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်သက်သာလာဖို့အတွက် အချိန်ယူနေပါတယ်။
ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ (၆) ပွဲသာ ကစားထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားဟာ ပေါ့ဂ်ဘာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်မှာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အက်စတန်ဗီလာအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အသင်းရဲ့ နည်းပြဟောင်း မော်ရင်ဟိုကိုင်တွယ်နေတဲ့ စပါးအသင်းနဲ့ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ရင်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်လို့ ပေါ့ဂ်ဘာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
“ပေါလ်ဟာ သူ့ဒဏ်ရာကနေ တဖြည်းဖြည်းသ်ကသာလာပါပြီ။ သူလာမယ့်ပွဲတွေမှာ ဘယ်လောက် ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်နေမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ သူပြန်လည်ပါဝင်နိုင်မှာက ကျွန်တော်တို့အတွက ်ကစားသမားအသစ်ကို လက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူလိုက်သလိုပါပဲ။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဒီနှစ်မှာ သိပ်မကစားခဲ့ရပါဘူး။ သူပြန်လာတာက ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်ရရှိလိုက်သလိုပါပဲ။ သူ့ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပြန်ကစားစေချင်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့လား? ဒါမှမဟုတ် စပါးနဲ့ပွဲလား? ကျွန်တော်အခုပြောလို့မရသေးပါဘူး။ သူ့ကို အခုမမြင်ရသေးပါဘူး။ သူ့ကျွန်တေ်ာတို့နဲ့ ပြန်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းမယ့်အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။
ဘယ်သူမှ သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီသမှု ကို သံသယမဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးအပေါ် ရူးသွပ်မှုကိုလည်း သံသယမဖြစ်မိပါဘူး။ သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အပြောင်းအရွှေ့တံခါးမဖွင့်မီ ကစားသမားသစ်တစ်ယောက်ကို လက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူလိုက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ကယ်ကိုလွမ်းနေပါတယ်။ သူဟာ အဝေးမှာ ရှိနေတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အခြားကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ စကော့၊ ဖရက်ဒ် တို့က သူ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်” လို့ ကြာသပတေးနေ့က အက်စ်တာနာအသင်းကို (၂-၁) ရလဒ်နဲ့ ရှုံးသွားတဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲအပြီးတွင် ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားဟာ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် နားနေရတဲ့ တွမ်မီနေးကိုလည်း လာမယ့် ရက်အတွင်း ပြန်လည်ကြံ့ခိုင်နိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။ စကော့ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာနိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူဟာ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ပြီဖြစ်နေသော်လည်း ကျွန်တေ်ာတို့ မမြင်ရသေးပါဘူး။ သူဟာ စပါးအသင်းနဲ့ပွဲမှာ ပါရင်ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြန်လာနိုင်ဖို့ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်” လို့ ဆိုးလ်ရှားက ထပ်မံပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကလပ်ပြိုင်ပွဲက လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားအတွက် အားအင်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မာနေး
အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေ ပြုံးပန်းဝေစေရမယ်လို့ ကြုံးဝါးလိုက်တဲ့ ယာယီနည်းပြ ယွန်းဘတ်
ခြေကျင်းဝတ်အရွတ် ဒဏ်ရာကြောင့် နှစ်သစ်ကူးကာလအထိ အနားယူရမယ့် ဖာဘင်ဟို